Farmaajo oo xaalka ku xunyahay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo xaalka ku xunyahay
Wararka waxay sheegeen inuu Farmaajo dib ugu laabanayo Teendhada Afisyooni, si uu wadahadallo ula galo maamullada iyo Mucaaradka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib markii Ciidamo taabacsan ay shalay illaa Xalay ay la wareegeen Xaafado muhiim ah oo ku dhaw Madaxtooyadda, Farmaajo ayaa soo wajahday xaalad casbi leh.
Saakay waxaa Muqdisho inta badan gacanta ku haya Mucaaradka, oo difaacyo ka sameystay hareeraha wadada Makka Al-Mukarama, Sayidka iyo nawaaxiga Garoonka diyaaradaha, waxaana gaabis ah maanta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Afarta dhinac Madaxtooyadda waxaa fadhiya Ciidanka taabacsan Musharixiinta Mucaaradka, iyadoo aan jirin dhaq-dhaqaaq ay sameynayaan askarta Haram-Cad iyo Gorgor oo kasoo bixi waayay saakay saldhigyadooda.
Farmaajo ayaa lagu soo waramayaa inuu u baqayo naftiisa isaga iyo Fahad Yaasiin, waxaana suurtagal ah in hadii uu dhaco dagaal kale inay isaga cararaan Villa Somalia, oo amaankeeda khatar ku jiro hadda.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Farmaajo uu ku laabanayo Afisyooni, si uu wadahadallo ula galo Musharixiinta mucaaradka iyo Maamul Goboleedyada, waxaana socda dedaallo ku saabsan qabashada shirka.